FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CAVA-CORGI - ALIKA
Alika avy any an-dafin'i Charles Spaniel / Pembroke Welsh Corgi alika mifangaro
Jackson the Cava-Corgi amin'ny faha-4 taonany
Ny Cava-Corgi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier ary ny Pembroke Welsh Corgi . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny fihenan'ny karazan-kazo mifangaro dia ny mitady ireo karazan-kazo rehetra amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'I Maya io. Cava-Corgi 3 taona izy. Milanja 24 pounds izy, ary hoheverina ho alika antonony. Ny reniny dia Mpanjaka Cavalier Charles Spaniel ary ny rainy dia Pembroke Welsh Corgi. Tamin'ny nahazoako azy voalohany dia natahotra ny zava-drehetra izy, saingy nihatsara be. Mitandrina izy amin'ny olon-tsy fantatra, alika hafa ary ankizy, fa hanaiky ny sain'izy ireo izy. Tena malemy paika izy ary mamy ny tahotra tsy nahatonga azy hasiaka tamin'ny fomba rehetra. Tsy dia mavitrika loatra izy fa mandany matetika amin'ny fandriana na fandriana. Faly foana izy mahita ahy rehefa mody aho ary tiany ny manaraka ahy manodidina. Ny hany fitarainana momba azy dia ny fandatsahany mafy ny volony fa tsy mitaky fanapahana izy fa tsy maintsy kosehina isaky ny 1-2 andro. Izy koa dia mora voan'ny plake buildup amin'ny nifiny. Fa amin'ny ankapobeny dia izy no alika mamy indrindra eto an-tany. ' Maya dia rahavavin'i Maggie, aseho etsy ambany.
'Zanako kely, Maggie dia hybrid. Ny reniny dia Pembroke Welsh Corgi ary ny rainy dia Mpanjaka Cavalier Charles Spaniel. Naheno azy ireo antsoina hoe Cava-Corgis sy Corgaliers aho. Ny namako iray dia tia mampifangaro ny Spaniel sy Corgi ho Sporgi! Nandeha fiara avy tany NH nankany Ohio aho haka ilay olon-tiana kely. Toa naka ny toetra tsara indrindra amin'ny karazany tsirairay izy. Alika am-paosy tokoa izy, toa ny Mpanjaka Charles Spaniel, ary hilamina avy hatrany rehefa alaina sy mipetraka am-pifaliana miaraka amin'izay rehetra. Hendry toy ny karavasy izy, toy ny Corgi purebred ihany, na dia mirona hivadika fanairana aza izy (toa ny Corgi anay!). Ara-batana dia manana tongony kely sy lava volo an'i Corgi izy miaraka amin'ny rambony lava volo somary malefaka izay mampihetsi-po tsy an-kijanona ary ny tarehy Spaniel mamy manana maso volontany lehibe sy sofina floppy malefaka. Heveriko fa ho kely kokoa noho ny Corgi mahazatra izy amin'ny haavony sy ny lanjany ary hitovy kokoa amin'ny Spaniel misy fefy kely kokoa. Amin'ny ankapobeny dia alika kely mahavariana sy mailo ary sariaka izy. Malemy fanahy indrindra amin'ny ankizy kely izy ary tsara fitondran-tena. Mihevitra ny hampiofana azy ho alika fitsaboana ho an'ny ankizy hopitaly aho. 9 volana i Maggie amin'ity sary ity. ' Maggie dia rahavavin'i Maya, aseho etsy ambony.
Maggie the Cava-Corgi (Corgi / Cavalier mix dog) alika kely amin'ny 8 herinandro
Lisitry ny alika mifangaro Corgi
anglisy taloha bulldog alika sary
sarinà pyrène tsara
alika kely wolfhound irlandey tsara
rottweiler mastiff afangaro amidy